Cabdiqani Qorane Cismaan — November 8, 2019
Wiilkii geel jirka ahaa 'Qiso'
Miyiga waxaa iigu dambeysay anoo yar, markii aan caqliyeystey ayaa la iga keenay oo aan magaalada imid. Anoo ilaa 6 jir ah, laakiin lix jirkan maanta jooga ahayn, sifiican ayaan wax walba ukala garanayay. Laakiin miyiga wax saa usii fara badan kamaan aqoon.
Toban sano kaddib ayaan aadey miyigii aan muddadaa dheer ka maqnaa. Waxaana igusoo dhacdey qisadan hoos ku xusan.
Qisadan waxaan qorey intaan wadey qoraalka buuggayga Tilman iyo Hoggaan ee aadka u kooban. Waxaan qorey anoo fasax gaaban ku tagey miyiga aanu degno. Fasaxu wuxuu igu qaatey muddo aan dheereyn oo aad u kooban, sababo la xidhiidha fasaxa lay siiyey oo koobnaa isna. Anoo anigu usocodey sidaan usoo qaadan lahaa hawo saafi ah, iyo sidaan ugasoo nasan lahaa Waxbarashadii aan muddada dheer kusoo jirey iyo magaaladii aan wakhtiga faraha badan kusoo qaatey, waxaan iska jeclaadey sidaan usoo arki lahaa waxyaabo aad ufara badan.
Haddaba Maalin maalmaha kamid ah, ayaa iyadoo halo dhalay la igaga sii tagey oo aan goor casar ah oo Cadceeddu dheertahay iskala jooga, oo Nirgihii yar-yaraa iska dhex fadhiya, mobilekeyga Smart phone ka ahna wad wada, ayaa xaggeyga dambe aan ka maqley jabaq amba Sanqadh.
Waan soo jaleecey xaggeyga dambe, mise waaba wiil yar oo geel jire ah oo dushiisa darxumo badani ka muuqato. Markaana ah ka lagu magacaabo (Daba-Dhoon), dadka Waaweyni kolay way garanayaan macnaha erayga, balse aan inyar idiin sharraxo macnaha erayga (Daba-Dhoon), maadaama oo ay jiraan dhalinyaro badan oo aan macnaheeda wax fara badan ka garaneyn.
Haddaba macnaha Dabadhoon waa wiilka yar ee dhibaatada ugu badani haysato, marka la joogo geel raacidda. Waxaaba la odhan karaa waa dulmane wiilka yar ee Daba-Dhoonka ahi. Ragga kale ee geel jiraha ah isagey alaabta oodhan udhiibaan, oo dusha kaga raraan sida Dhiilka, Gudinta, Usha, Go’a, I.w.m.
Kaaga daranta wiilka yari asagu tuulaha ma tago, xagga ragga kale ee geel jiraha ah ay iyagu iska soo qayilaan oo tuulaha intey doonaan ku maqnaada, asagu geela ayuu xaga hore kasii raacaa, Haddii uu diidana wixii ku dhaca asagaa isugu wacan.
Haddaba wiilkii markii aan Eegay sidii caadada Soomalida u ahayd waanu isi salaamnay oo waanu isbariidiney sheekaduna sidan ayay ku bilaabmatey:-
Geel Jire: Maxaad sheegtey
Geel jire: Waar geelu waa qoloma?
Aniga: Yaaab!! Maxaad ka rabtey adu qoladayada!
Geel jire: HHHH!! Waar ma reer magaal ayaad tahay?
Geel Jire: Markiiba waan ku gartey inaad reer magaal tahee, Hargeysa ayaad ka timi miyaa.
Aniga: Haa reer hargeysa ayaan ahay.
Geeljire: haa gartey oo xilima ayaad timi halkan.
Aniga: Adu ilaa 6 casho waan joogey.
Geel jire: Oo maxaad meshan kasoo doontey.
Aniga: Ardeybaan ahay, oo waan iska soo caaano doontey.
Wiilkii yaraa ee geel jiraha ahaa markaanu is wareysanay kaddib, ayaa uu tariikhdiisa iiga sheekeeyey, Casharkaan ka faa’ideyna ilaa haatan waan ku dhaqmaa. Horta wuu ila yaabay waxaanu igu dhahay meesha iskaga carar.
Geel jire: Waar meshan iskaga carar?
Aniga: Oo maxaa dhacey ee aan uga cararayaa!!.
Markaanu xaggaa isla mareyno ayaa waxa uu sheekada iiga bilaabay:-
Markaan yaraa magaalada ayaan joogi jirey, waxna waan ka dhigan jirey. Kaddib sag-saag ayaan waxbarashadii ka noqdey, maalin kaste macalin ayaan is dili jirney.
Adu waa la igasoo eryay iskuulkaan dhigan jirey, magalada ayaan bilaa camal iska dhex joog joogi jirey.
Kaddib reerkayagii ayaa inacay oo ila caloobay, ileen qofaan waxba baraneyn cidna wax kuma falaysee.
Reer kii ayaa waxey Go’aan ku gaafheen inay miyiga iidiraan, miyiga oo ay daganaayeen adeeradey oo geel fara badan leh. Anigu maan oggoleyn oo kumaan qanacsaneyn inaan miyiga aado amba tago.
Balse waxa la igu yidhi sidaadan oo kale, fasax ayaad kaga soo noqoneysaa miyigee inna mari Laasgeel ayaynu tageynaayee, Laas geelna markaa waxa joogey geelii adeerkay oo biyaha dhanaan la keenay, markaanu nimi Laasgeel ayuunbaa geelii oo Hawd sii qabanaaya dhinac la iga raaciyey.
Waar markaa adna orad oo waxbarashadaadii ku noqo geelan iskaga dhex tagoo, yaanad sideyda oo kale noqonine.
Markuu meeshaa wax marinaayo ayaan Shakiyey, oo is idhi waar adigana bilaa lagu soo wanjalay oo lagu yidhaahdaa geelaa dhan ka raac.
Kaddib markaan dhawr cishoo sii joogeyba waan iskaga imi, fasaxeyga oo yaraa awgeed. Ta ka daran taniba waxa weeye waxaan seexan jirey ardaa, Ardaaga waxa kasoo hor jeeda waxa la dhaho (Dudumo) oo ay mas iyo wax kastaba galaan.
Aniguna maska aad baan uga baqan jirey. Raggii geel jiraha ahaa ayaan ku idhi waar meesha mas muu joogaa??, Waxeyna iigu jawaabeen “May”, waligiiba muu iman, Ragga geel jiraha ahna maba naxaan sidoodaba, sidaan qisada xageeda hore kusoo xuseyba.
Haddaba malintii danbe anoo tuulaha kusii socda, xerada geelayaga iyo tuulaha waxaa loo kala socon jirey 4 saacadood, markaanu Xoogaa ka durugnay xeradii Geela, ee aanu meel dhexe mareyno, ayaan is idhi meel kusoo xaajo gudo, Geed yar ayaan is idhi hoos fadhiiso anoo sitey caagad yar oo biyo iigu jireen. Inta aanan wali fadhiisan geedkii ayaa isheydu waxey ku dhacdey, Bahal mas ah oo geedka ku hoos jirey.
Sidaan horeba usoo sheegey, Maska aad baan uga baqaa, cagadii meel aan ku tuurey garan maayee, waxaan is arkey anoo qayliyey, oo uu kii geel jiraha ahaana ileeyey maxaa ku heley. Isla markaan tuulaha tagey ba, Habeen nimadiisii ayaan gaadhi qaad soo raacey, Balaaya, Mas danbe aragta xera geel dambena seexata.
Haddaba qisada wiilka geel jiraha ah waxaan ka faa’idey dhawr qodob:-
1- Qiimaha waxbarashada
2_ Qiimaha macalinka
3- Qaddarinta iyo ixtiraamka ehelkiina.
4- Dhibaatada kibirka iyo qal-qaalli nimada.
5- Nimcada ay haystaan, Carurta magaalada joogta ayna dareensaneyn.
Waxaad ka faa’idey adna ma noo sheegi kartaa?.
Wiilka yar waxaan is idhi Muuqaal (video) kaduub oo wareyso, Laakiin iimay suurto galin. Sababtoo ah wiilka yari wuu ka xanaaqayaa mobile ka iyo waxaa, waata kale cid iiduubta oo ii qabata mobile ka mesha maba joogto.
Bogga 102aad ee buugga Tilmaan iyo Hoggaan.
Tags: Wiilkii geel jirka ahaa 'Qiso'
Next post Maxaa Sababo Mataggida dhiiga( Hematemsis?
Previous post Sidee Qofku Ku Noqdaa Mid Baqli Badan